Prapta: Waxkasta oo Nolosha waa halkan | Martech Zone
Saturday, April 21, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qoraalkeyga ugu horeeya ee la kafaala qaaday waxaa loogu talagalay Prapta, degel isku xirka bulshada oo qora "Wax walba oo nolosha ah halkan waa!" Waxay sidoo kale noqon karaan kuwa ugu horeeya ee awooda inay sheegtaan "Wax walba oo ku saabsan Xiriirinta Bulshada iyo Webka 2.0 waa kan!" Dadkani shaqo adag bay ku ahaayeen hubaal!
Marka laga eego dhinaca tiknoolajiyada, tiknoolajiyadda ka dambeysa Prapta waa wax aan caadi ahayn. Goobtu waa 100% Ajax. Kulamada, Blogs iyo waxqabadyo kale waxay ku saabsan yihiin Khibradaha Nolosha ee shabakadda. Waa runtii qabow ku saabsan isku xirka bulshada… halkii aniga, aniga, aniga ama adiga, adiga, adiga, Prapta waxaa xuddun u ah “innaga”. Waxay ku uruuriyaan dhammaan macluumaadka ku jira arjiga khibradaha.
Waxaan aaminsanahay kooxda da'da bartilmaameedka loogu talagalay Prapta waxaa laga yaabaa inuu yahay dhalinyaro qaangaar ah (Aad baan u da 'weynahay inaan ku raaxeysto khibradaha qaarkood sida dooda Absinthe ee hoos ku xusan! :).
Waxa kale oo jira mashiin raadin aad u adag oo la tartami kara wax kasta oo adeegga shukaansi online. Qiyaas shukaansiga khadka tooska ah ee internetka haddii ay yeelan lahayd baloogyo, doodo, waaya-aragnimada nolosha, fariimaha deg-degga ah, aalladaha iyo sheekaysiga khadka tooska ah (sheekadu way soo socotaa dhowaan) waadna leedahay Prapta! Haddii aan ordi lahaa adeegga shukaansiga ee khadka tooska ah, waxaan si daacad ah ugu ruxayaa kabaha kabaha xal sidan oo kale ah.
Wax kasta oo ku jira dib-u-eegista ma noqon karaan kuwo jilicsan, in kastoo, sax? In kastoo codsigu si bilaa cillad ah u socday (runtii wuu sameeyay - wax dhib ahna kuma qabin haba yaraatee), waxaan u maleynayaa inay jirto fursad weyn oo lagu horumarin karo bilicsanaanta dalabka. IMHO, Web 2.0 kaliya maahan wax isdhaafsiga Ajax, sidoo kale waa fudeyd iyo adeegsi fudud.
Astaanta loogu talagalay Prapta waa dawakh iyo uni-cabbir. Astaantu sidoo kale waa mid toosan halka isdhexgalka uu inta badan yahay mid jiifa sidaa darteed wuxuu u muuqdaa mid aan meesha oolin. Wax kasta oo shaashadda ka muuqda waa isku mid, mana laha cabirro, jaangooyooyin, iyo hoos midab. Waxaan garwaaqsaday qayb ka mid ah tan inay ugu wacan tahay awood u lahaanshaha bogga laakiin waxay ka tagaysaa dalab yar oo fidsan (pun loogu talagalay).
Waxaan kugula talin lahaa isdhexgalka mawduucyada adag halkii laga dooran lahaa ikhtiyaariyada habeynta hadda… dadka u oggolow inay si firfircoon u beddelaan wax walba halkii ay ka ahaan lahaayeen font, font-size iyo midabada bogga. Web 2.0 wuxuu ku saabsan yahay muujinta naftaada - tani waa waxa ka dhigaya shabakadaha kale ee bulshada kuwo caan ah. Sidoo kale, meelaynta qayb ka mid ah ayaa ah mid camiran oo aan ahayn biraawsar. Tusaale ahaan font iyo u qaabeynta midabku si sax ah aniga iima siinayo:
Taasi waxay tiri, waa inaan siiyaa Prapta darajooyinka ugu sareeya ee suurtogalka ah marka la eego awoodaha dalabka oo aan ahayn bilicsanaanta. Tani waa hawl aad u wanaagsan oo horumariyayaashu u qalmaan ammaan weyn! Maalgelin lagu sameeyo farshaxan farshaxan weyn oo khibrad u leh barnaamijyada websaydhka ayaa barnaamijkan u gudbin doona guud ahaan iyo caan ahaan. Waxaan si daacad ah u maleynayaa inay tahay sababta kaliya ee aanan u maqlin Prapta ka hor!
Tilmaamaha ugu dambeeya: Looma baahna in kor loo qaado xalka sida Ajax ama Web 2.0. Dadku uma isticmaali doonaan dalabkaaga sababahan awgood. Ku dhiirrigeli goobta waxa ay tahay - meel aad u fiican oo lagu wadaago khibradaha, looga doodo, kuwa kalena laga helo!